I-Similipal Bhitarkanika 4 Night / ii-5 Iintsuku - Iindwendwe ezibukhenkethi I-India- Tour Operator eBhubaneswar - 91-993.702.7574
I-Intercity - SIMILIPAL BHITARKANIKA
Similipal Bhitarkanika 4 Night / 5 Iintsuku ubuninzi
Udidi: Bhitarkanika tag: Iphakheji yentsapho
I-COST COST: Ngomntu ngamnye nge-Tour Basis (KwiiRpees)
Ngezantsi kwezinga alivumelekanga ngexesha lexesha leSeshini (ixesha le-Durga puja, iNyaka entsha kunye nexesha le-Chistmass, iiholide zeSizwe, i-RathaYatra Périod, ixesha le-Holi)
02 Abantu 33,679.00 33,679.00 33,679.00 33,679.00
04 Abantu 23,586.00 23,586.00 23,586.00 23,586.00
06 Abantu 21,315.00 21,315.00 21,315.00 21,315.00
08 Abantu 24,268.00 24,268.00 24,268.00 24,268.00
10 Abantu 21,725.00 21,725.00 21,725.00 21,725.00
Ibhedi elongezelelweyo 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00
USUKU 01: I-ARRIVAL BHUBANESWAR - BHITARKANIKA
Emva kokufika kwisikhululo sesitimela seBhubaneswar / i-Airport ukuya eBhitarkanika. Endleleni eya e Ratnagiri, u-Udayagiri & Lalitgiri (iiNgqekembe zamaBuddha kunye ne-Stupas). Ukufika kwi-Sand Pebbles Jungle Resorts. Emva kwesidlo sasekhaya sasekhaya saseKalibhanja iDiha kwisikhunjana esasemaphandleni esivunywe yiSebe le-Wildlife, ukuba ujonge i-panoramic View of Ramsarsite. Ngaphandle kokunandipha umlilo wekampu kunye neSokutya kunye neSidlo Sokuhlwa kwiSand Pebbles Jungle Resorts.
USUKU 02: BHITARKANIKA
Emva kwesidlo sasekhaya sasekhaya saseKhisimusi siya kwi-Bird Sanctuary, ukuya kwi-Hunting kwinqaba ye-Ancient King kunye neenqanawa ezahlukahlukeneyo kwiindawo ezikulo mkhunjini ezivunyiwe yiSebe le-Wildlife, ukubona iinqwenqa, ukuvakashela kwiMyuziyam kunye neProjekthi yeNdawo. Emva kwesidlo sakusihlwa, nwabele ubuhle bemvelo kunye nommandla we-paddy. Ngomso-mva tyelela itempile yaseJagannath ukuba uthathe inxaxheba kwi-Live AalatiDarshan. Ngobusuku ujabulise umlilo we-camp with Snacks and Dinner, ubusuku bonke eSand Pebbles Jungle Resorts.
USUKU 03: BHITARKANIKA - SIMILIPAL
Emva kwesidlo sakusasa sakusasa sakusasa kwiSimilipal Tiger Reserve. Ukungena kwihotele. Emva kokuhamba kwemini yokuhamba kunye nokufundiswa kwendalo kwindlovu yezilwanyana, tyelela kwiFama leZityalo zokuzalisa. Ukutya isidlo kunye nobusuku eSimilipal.
USUKU 04: SIMILIPAL
Emva kwesidlo sasekuseni uye kuBarehipani kunye noJoranda Waterfalls kunye neJungle Safari. Emva koko tyelela kwiChahala Zone. Ukutya isidlo kunye nobusuku eSimilipal.
USUKU 05: I-SIMILIPAL - IBALASORE / IBHUBANESWAR I-RAILWAY STATION
Emva kwesidlo sasekuseni, ukuya kwisikhululo seSilaya saseBalasore / Isikhumulo seBhubaneswar sokuhamba.
Yiba ngowokuqala ukuphonononga "Similipal Bhitarkanika 4 Night / 5 Days" Rhoxisa impendulo